Halkaan waxaan jecelahay inaan kusoo bandhigo, gabay yar oo ka hadlaaya, dhacdooyinka maanta ka taagan waddankeenna. Waxaana iga keenay, inta badan marka aan ka hadlayno, haddaan Soomaali nahay, dhibaatooyinka na haysta, inaan ku howshoonno oo qura eedaymaha ku foolan dowladaha shisheeye, isla markaana, aan is-duudsinno kaalinta aan (eedda burburka nolosheenna iyo qarankeeni Soomaaliyeed)ku leennahay. Taasoo ah been ama inkirmaad tan ugu xun, waayo, waa mid kuu diidaysa inaad isbedel samayso, oo aad isi saxdo, maxaayeelay, qofku wuxuu isi-saxaa, marki garowshiinyo laga helo, oo uu qirto qaladkiisa. Sidaas darteed, waxay ila tahay, annagu marka hore inaan leenahay eedda koowaad oo aan nahay “dal dad waayay”, marka xigana ay dunidu (US, ETHIOPIA, UN, OAU,EU,IGAD, CARAB, IWM) na hagratay, oo ay tahay, “duni damiir beeshay”.
Si kastose ha ahaatee, adduunyadu waxay tahay ayay tahay- annagana kama dhigin sidaas - xilka koowaadna ma’aha inaan toosino(waaba haddii aan karnee) ee waa inaan marka hore helnaa sidi aan u badbaadin lahayn jiritaanka waddankeenna, kadibna aan wax ula qabsan lahayn, ulana tartami lahayn adduunyada annagoo diinteenna, dadkeenna iyo dalkeennaba u shaqaynayna. ninbaa hadda ka hor waxow yiri “dabadaadiyoon dednayd daaqadna u wayday, inaad dabo islaameed deddaa waa dabbaalnimo”, . Waxaan uga jeedaa nolosha adduunyadu way fursado badan tahay, mid haddii ay ku dhaaftana midda kale ayaa la rabaa inaad ku dadaasho, balse waa danyuusnimo inay fursad la’arko ku seegtaa adiga oo nool - haddii aan Soomaali nahayna - waxaa na soo maray fursado badan oo aan qarankeenni lumay dib ugu soo celin karnay (Manifesto Group ama Cali Mahdi, Dowladdii Carta, MMI, iyo kuwo kale) intibana waan luminnay.
Marka gabaygu wuxuu ka hadlaayaa: Inaan kaalin weyn ka qaadannay burburinta waddankeenna haddaan Soomaali nahay loona baahan yahay inaan eeddeenna aqbalno si aan isu saxno oo aan isu daba-qabanno, iyo in aan tagtada ka run-sheegno oo aan ku wada dheehno dhinacyadeedoo dhan, si ay jiilasha danbe uga faa’iidaystaan. Marka aniga oo dooddaas ayada ah iyo isqabadsiinaaya marxaladdeennu maanta meesha ay marayso, iyo inaysan ciidamada Itoobiya awoodeen inay soo galaan waddankeenna haddii aysan ahayn 16ki sano oo aan kusii jeednay gobolaysiga iyo gulufka colaadeed, iyo sababo kaleba, ayaan idinku soo dhoweynayaa gabaygii.
Xa’da maanso, xuuraansiga gabay , xilalka suugaanta
Nin xansaday baan ahoo, murti laga xambaartaahe
Xanjeersigeedaa bulshadu igu xushmaysaahe.
Xaruntii aan istaagaba waa la’i xasuustaahe
Xariiraa la’ii dhigaa xaafaddii aan aadaba’e
Xaashaa Lillaahiye Soomaali waa ii wada xabiibe.
Anna kuma xilafuree maraan u xantoobiyaahe
Xishoodkeeda anigoon ka tagin ayaan xiddigiyaahe
Marse haddii xaalku kala anbado way xayirantaahe.
Inyaroose xajiskii hurdada xalayto ii diidday
Oon xaraarugayaan rabaa inaan xaraashaahe
Nin xeytayoo Allow hayga dhigin xoori kari waayay.
Xoodxoodasho lama rabiyo, xan iyo deelqaafe
Been lama xigsado run haddii la xultamaayaahe
Xaaraan wixii dhaxlaahi waa xiitiyo hooge.
Xaaliga lafeed waxaa ka roon inaad xakaartaahe
Xalaal adiga oo heli kara haddii aad u xuurto
Waa xaraar jidsan xeeradaan kugu soo galine.
“Xujo lama falee xaajadaa lagu heshiiyaahe”
Xabadkaa wax laga arkaa indhuhu waa xubine
Xaaddu waxay istaagtaa markaad xantaxantootaahe.
Afartaas ma xardhay waatii aan xeeladayn jiraye
Ma xifdiyay aniga oon ku darin xagatin waa iine
Afar kalana xalladdi aan lahaa xadartankeedii dheh.
Xoogsheegashada dunidiyo waaga xumaantiisa
Xuub anigoon ku qarinayn xiiqda nagu taagan
Xulufana aan u oggolayn xudduudaheenoo dhan.
Xaashidu waa laba bogleey xagalladeediiye,
Haddii aan xaq loo wada dhahayn xuruufahay sheegto
Oon xaladhalay maahane sheekada laga wada xiisin.
Xanuunka wixi keenay haddaan laga wada xaalin
Eedda tii xaggaaga ahaa laga xanaaqaahe
Inay saas ku xididdaysataa sow xog dhiman maaha.
Waa xeel adduunyadu tafaha la’is xiraayaahe
Xabashana nagama adkayn tan iyo xaataaye
Toban iyo xoogaa sano waxaan ka xaragoo waynay
Xamar iyo Hargayso wixii kala xiriir gooyay
Xeebaha Yemeneed wixii meyd xanniban yiillay
Xurmo ayagoon wadan wixii xaasas naga dhoofay
Reerohoodii wixii xaawaleey lagu hor xumeeyay
Xuddur iyo Kismaanyiyo Bari, xeryaha Boorame
Tan iyo Xaafuun wixii xabbado duulaayay.
Xinjiro daadiskiyo umulihii xawda laga gooyay
Talo iska xigsigii iyo dhagihii layska xisas ootay
Inti aan isku xoomanayn xagaayadi duulay
Xaasid waddan ma waayiyo nacas xasuuqaahe
Mar haddaan xilligu dabramayn xowli socodkiisa
Xawaaraha aan ka harnaa na baday xusulgaabnida’e.
Xoolo bowd la’aaneed ma jiro nacab xannaanshaahe
Haddii aysan kuu xisaabsanayn waa lagaa xadiye
Xunbo cuskashadu waa waxaan xayska kaa dhigine.
Xikaayadaha barkood haddii laga xifaaloodo
Barna lagu rogo xaab ee aan laga xajiimoonin
Laa-xowla walaa quwata waa xakamaddeeniiye
Xaakin aawadii hadday xornimo kuu dhalato
Si xeego loo xagtaa jirtee haddii lagu haleeshiiyo
Si aan dib loogu xogan mar waa laga xaluushaahe
Ninki is-xallin waayiyo ninkii xadka usoo dhaafay
Labadaas xaqba tagtadu waa inay xariiqdaahe.
Inay saas ku xididdaysataa sow xog dhiman maahee.
*”DAL DAD WAAYAY IYO DUNI DAMIIR BEESHAY”
Qoray; Maxamed Daahir Afrax. Buug qiimo leh.